Secretary General nke atọ Chamber of Ningbo ozugbo offsite Salon - China Yuyao Hengwei sooks mwekota
April 25 ụtụtụ, Secretary General nke Ningbo obodo ozugbo n'okpuru Ọbịa Chamber of Commerce Chamber of Commerce kwadoro site Quzhou atọ Ụlọ Mmanya, ẹkenịmde ke Chamber of Commerce otu ụlọ ọrụ Quzhou, Quzhou ọhịa azụ ahịa Siming Road.
Soro na a Chamber Sharon Hangzhou na Wenzhou Chamber of Commerce, na Chamber of Commerce, Heilongjiang, Anhui Chamber of Commerce, na Chamber of Commerce, Shandong, Sichuan Chamber of Commerce, Chamber of Quanzhou, Jiaxing Chamber of Commerce, Chamber of Chizhou, Jinhua Chamber of Commerce, na Chamber of Commerce na ndị ọzọ na waya USB akara karịrị 40 Secretary-General.
Sharon isiokwu nke "otú e si akpọ ọrụ nke osisi nke nlekọta," m ga 沈培荣 Chizhou Chamber of nlegide na Board of nlegide Yerong Bin kpọrọ dị ka a ọbịa okwu.
Mgbe ọgwụgwụ nke Ụlọ Mmanya, Quzhou Chamber of Commerce Deputy Secretary-General Wang Qinghua n'ụzọ mmetụta uche, kwuru, abụọ nlekọta ogologo ahụmahụ na-ewebata a nnọọ uru akwụkwọ, ọ bụ uru na-amụta. Board of nlegide na-arụ ọrụ ga-eme: mbụ, ka ndị Board of nlegide na Chamber of Commerce ke "One"; Nke abuo nlekọta Board na ya kwesịrị "ekwe"; mgbe ahụ Board of nlegide eme ihe ike "egwu."
Minister nke Ụlọ ọrụ na Commerce otu ngalaba nke Ningbo Xu Xiaohua, osote ozi nke Ozi nke 李安奎 òtù nwekwara e òkù isonye na-eme. Xu Xiaohua, Deputy Minister na Minister maka Ụlọ Mmanya 李安奎 nyere a elu fim, na-atụ anya yiri omume n'ọdịnihu a ọtụtụ nke bara uru na-eme, iji otutu ọrụ offsite Chamber of Commerce.